UPDATE ,नेपालकाे पूर्वी भेगमा भुकम्प पुरा बिबरण सहीत - Tanahu Post
UPDATE ,नेपालकाे पूर्वी भेगमा भुकम्प पुरा बिबरण सहीत
झापा – भारतको सिक्किममा भुकम्प गएको छ । नेपाली समय अनुसार राति ८ बजेर ५२ मिनेटमा ४ दशमलव ७ म्याग्निच्युडको भुकम्प गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।उत्तरमा २७ दशमलव ५ डिग्री र पूर्वमा ८८ दशमलव ४ डिग्रीमा रहेर इपिसेन्टरको गहिराइ २८ किलोमिटर रहेको जनाइएको छ । भुकम्प पूर्वी नेपालको झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा महसुस गरिएको छ । भारतको सिक्किमसहित दार्जिलिङ जिल्लामा भुकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । भुकम्पपछि त्यस क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ ।
नोम्पेन्ह। कम्बोडियाली राजकुमार नोरोडन रानारिध र उहाँकी श्रीमती आइतबार बिहान सडक दुर्घटनामा परी घाइते हुनुभएको समाचार छ ।उहाँहरुलाई विपरीत दिशाबाट आएको ट्याक्सीले धक्का दिएको बताइएको छ । उहाँहरुको अवस्था गम्भीर नरहेको र उपचाररत रहनुभएको स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएका छन् ।
उहाँहरु कम्बोडियाको दक्षिणपश्चिमी पेराह सिंहानुक प्रान्तको एक सडकमा सवारीमा हुनुहुन्थ्यो । आइतबार बिहान स्थानीय समयअनुसार ९ बजे उहाँहरुको सवारीलाई धक्का दिएको थियो ।राजकुमारको देब्रे हातमा चोट लागेको छ । उहाँहरु दुवै जना खतरामुक्त हुनुहुन्छ– उक्त प्रान्तका प्रहरी प्रमुख र उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरुले उहाँको सवारीसाधनलाई ठक्कर दिने ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही थालिएको पनि प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन् । रासस/सिन्ह्वा।
अनामनगर भाट्भटेनि नजिक भिसन आगलागी नियन्त्रणमा ल्याउन हम्मे हम्मे।
दुइ नेपाली युएईमा यसरि अलपत्र भएका छन् स्वार्थि एजेण्ट भन्छन्–जेसुकै गरून ! सक्दो शेयर गरौ
Prevभर्खरै मुग्लीन बाट आयो दुखद खबर
Nextभर्खरै नेपालकाे पूर्वी भेगमा गयो सक्ती साली भुकम्प
रोमान्टिक यौन कथा :- सुत्ने बेलामा फोन गरि उसले। बच्चा बनाउन के गर्नपर्छ ? १८ + मात्र पढ्नुहोला (5)
एकै दिनमा ३१ जनासँग सेक्स गरेकी एक युवतीको हेरौ यौन कथा (4)
जैले पनि रक्सि खाएर आए पछि यो के भयो ??? (2)
रुकुममा बस दुर्घटना : एक बालकको मृत्यु, दुई घाइते (2)